Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Toerana fialan-tsasatra any Etazonia indrindra sy lafo indrindra
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Kolontsaina • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Miaraka amin'ny famerana ny dia mbola an-dàlambe, Amerikanina maro noho ny hatramin'izay no misafidy ny hiala sasatra akaikin'ny trano.
Ny fandinihana dia nijery ireo tanàna lehibe indrindra any Etazonia hahitana ny toerana lavitra indrindra sy mora vidy.
Oklahoma City no toerana mora vidy indrindra amin'ny fitsaharan'ny tanàna any Etazonia.
New York City no toerana fialan-tsasatra lafo vidy indrindra any Etazonia.
Miaraka amin'ny fameperana fitsangantsanganana izay misy Amerikana betsaka kokoa noho ny hatramin'izay misafidy ny hanao vakansy akaikin'ny tranony, ny manam-pahaizana momba ny dia dia nanambara ny toerana fialan-tsasatra amerikana lafo indrindra sy lafo indrindra hanomezana aingam-panahy ny dia manaraka!
Ny fandinihana dia nijery ireo tanàna lehibe indrindra eto amin'ny firenena mba hahitana hoe iza no mora indrindra, mifototra amin'ny anton-javatra toy ny sakafo sy zava-pisotro, ny vidin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny fitaterana.
Toerana itodiana 10 mora indrindra any Etazonia
laharana fihetseham-po Beer Divay Sakafo fisakafoanana Taxi (saran-dalana 1km) Tapakila fitaterana an-toerana tokana Vidin'ny hotely isan-alina (faran'ny herinandro) Isa azo vidiana / 10
Ny fanadihadiana dia nahitana ny tanànan'i Oklahoma ho toerana mora vidy indrindra US vaky tanàna. Ny tanàna no mora indrindra noho ny antsasaky ny anton-javatra voadinika, mitentina $ 3 fotsiny ho an'ny labiera, $ 11.50 ho an'ny sakafo any amin'ny trano fisakafoanana, ary $ 106 ho an'ny alina ao amin'ny hotely! Raha mahaliana anao ny Old West, dia tsy maintsy tsidihina ny Oklahoma City, ahafahanao mitsidika ny National Cowboy & Western Heritage Museum, andramo ny tananao mitaingina omby sy mitaingina soavaly mitaingina soavaly, na maka rodeo!
Indianapolis dia tanàna iray hafa mora vidy indrindra hitsidika azy, mitana ny laharana faharoa. Ny fitaterana dia mora vidy indrindra, miaraka amin'ny tapakila tokana amin'ny fitaterana eo an-toerana izay mitentina 1.75 $ fotsiny, ary saran-dalan'ny taxi-be 1km amin'ny $ 1.24. Arahin'i Tuscon, safidy malaza ho an'ireo maniry hitsidika ny Valan-javaboary Saguaro ary iray amin'ireo tanàna mora vidy indrindra hitsidika azy!
Toerana 5 lafo indrindra any Etazonia
2 San Francisco, Kalifornia $7.50 $15.00 $20.00 $1.86 $3.00 $231 3.07
Amin'ny maha iray amin'ireo toerana fizahan-tany malaza indrindra, tsy eto Etazonia ihany fa manerantany, dia tsy dia mahagaga loatra ny mahita izany New York City no toeram-pialan-tsasatra lafo vidy indrindra any Etazonia ihany koa, raha eo amin'ny laharana faha-4 kosa ny mpifanila vodirindrina amin'i Brooklyn. NYC no tanàna lafo vidy indrindra noho ny efatra tamin'ireo metatra enina nojerena: labiera ($ 7.81), tavoahangy misy divay ($ 15), sakafo fisakafoanana ($ 20), ary fijanonana amin'ny hotely ($ 309 isan'alina).
Tanàna malaza iray hafa be dia be no mitana ny toerana faharoa, miaraka amin'i San Francisco mifanandrify amin'i New York raha ny vidiny sasany no tsy dia taraiky ny ankamaroan'ny hafa. Ary koa toerana iray malaza be noho ny mari-trano sy ny maritrano, ity tanàna ity koa dia iray amin'ireo mpitrandraka avo indrindra any Etazonia, izay mampiakatra ny vidin'ny mpitsidika ihany koa.